Ruleti adịghị mkpa ọ bụla iwebata. Ruleti e achị ụwa nke casinos dị ka eze kemgbe ahụ e inception nke casinos. All cha cha egwuregwu ga-ekweta na UK ruleti Live daashi bụ ihe kasị mma cha cha egwuregwu mgbe ọ ga-anọgidekwa na-kasị mma.
Ndụ Automatic ruleti bụ ọganihu nke omenala ruleti. Dị ka aha na-ekwu,, egwuregwu a bụ akpaghị aka online version nke omenala ruleti. The akụkụ kasị mma bụ na ị nwere ike igwu a online ruleti ndụ na ndị ọzọ egwuregwu. Nke a na-eme ka Ịgba Cha Cha ahụmahụ bara uru na ọbụna nke a nke abụọ ga-adị gị ka ị na-egwu na-akpọ ndị online version nke a na-ewu ewu cha cha egwuregwu.
Banyere Developer nke Live Automatic ruleti
The oghere na mepụtara NetEnt. Dị ka cha cha egwuregwu, Mmepụta nke a cha cha egwuregwu adịghị mkpa ọ bụla iwebata. Tọrọ ntọala n'afọ 1996, ọ bụ otu n'ime ndị na-eduga cha cha egwuregwu na mmepe na ọtụtụ feathers na ya na okpu. ebe ọ bụ na n'oge gara aga 20 afọ, NetEnt ama akanam utom na online cha cha ụlọ ọrụ site na-emepe emepe nke kacha mma cha cha egwuregwu.
Ihe mbụ banyere n'ebe a bụ na a ruleti bụ dị ka omenala n'ala ndị dabeere na ruleti. The naanị ihe dị iche n'ebe a bụ na ị ga-enweta na-egwu a UK ruleti Live daashi cha cha egwuregwu na ekwentị mkpanaaka na ihuenyo na a, n'onwe ya, bụ ihe ịtụnanya ahụmahụ.
Ị ga-enweta a wheel nke na-akpaghị aka, a na-akwụ table na ị nwekwara ike ikori na ndị Player na-akpọ UK ruleti Live daashi egwuregwu na ị. The akwụ table ga-ekpebi ihe payouts. The ruleti ga- 37 compartments. The ohere mpere ga-ọnu site 0 to 36.
Dị ka omenala ruleti, na ihe ọkpụkpọ kwesịrị ịkụ nzọ ma ọ bụrụ na bọl dara na-nri ebe, ọ ga-enweta nkwanye on a UK ruleti Live daashi. The mgbawa ụkpụrụ na- 1,5,25,100 and 1000.
-Egwu Live Automatic ruleti, na ihe ọkpụkpọ ga-mkpa ghota ihe mgbawa uru na ebe ahụ nzọ site na-ahọpụta a ọnụ ọgụgụ ma ọ bụ ịkụ nzọ nso ke okpokoro. The ọkpụkpọ nwere ike idowe otu n'ime (ogologo nzọ, gbawara n'etiti nzọ, atọ akara nzọ, nkuku nzọ, ma ọ bụ isii akara nzọ) ma ọ bụ na mpụga nzọ (ọbụna / iberibe, agba, 1-18/19-36 ma ọ bụ kọlụm).
Ndụ Automatic ruleti bụ otu n'ime ndị kasị ịtụnanya online cha cha UK ruleti Live daashi egwuregwu. Ọ bụ fun na-egwu na-enye ihe kasị mma ụgwọ ọrụ. Nke a online egwuregwu bụ a ga-egwu ihe niile na-cha cha ndị hụrụ.